1 Samoela 1 - Ny Baiboly
1 Samoela toko 1
Ny nahaterahan'i Samoela - Ny nanokanana azy ho an'Andriamanitra.
1Nisy lehilahy anankiray tany Ramataima-Sofima, any amin'ny tendrombohitr'i Efraima, atao hoe El-kanà, zanak'i Jerohama, zanak'i Eliò, zanak'i Taohò, zanak'i Sofa; Efrateana izy io. 2Nampirafy izy ka Annà no anaran'ny vadiny anankiray, ary Fenenà kosa, ny anankiray. Nanan-janaka Fenenà, fa Annà kosa tsy mba nanan-janaka. 3Niakatra avy any an-tanànany isan-taona ralehilahy io, hivavaka amin'ny Tompon'ny tafika sy hanatitra sorona aminy, any Silao. Ary tao ny zanak'i Jelì, roa lahy, dia Ofnì sy Finea, mpisoron'ny Tompo. 4Tamin'ny andro nanateran'i Elkanà sorona, dia samy nomeny anjara avy Fenenà vadiny, sy ny zanany lahy aman-janany vavy, 5ary Annà nomeny anjaran-droa satria tiany Annà, ary nataon'ny Tompo momba. 6Sady mbola nankalozain'ity rafiny mafy izaitsizy koa izy, mba hampalahelo azy amin'ny nanaovan'ny Tompo azy momba. 7Ary toy izany no nataon'i Elkanà isan-taona isaka ny iakaran'i Annà any an-tranon'ny Tompo; fa nampijalin'i Fenenà toy izany ihany koa izy. Ary tamin'izany dia nitomany izy sy tsy nihinan-kanina. 8Hoy Elkanà vadiny taminy: Ry Annà ô, ahoana no itomanianao sy tsy ihinananao hanina? Ary nahoana no malahelo ny fonao? Tsy mihoatra noho ny zanaka folo lahy va aho, ho anao?
9Nony avy nihinana sy nisotro ny olona, tany Silao, dia nitsangana Annà kosa. Helì mpisorona izany, nipetraka teo amin'ny fipetrahana anankiray, teo anoloan'ny anankiray amin'ny tsato-kazon'ny tempolin'ny Tompo. 10Fo vontom-pahoriana no nivavahan'i Annà tamin'ny Tompo ary nipotrapotraka ny ranomasony; 11ary nivoady izy, nanao hoe: Iavehn'ny tafika ô, raha mba mitsinjo ny fahorian'ny ankizivavinao hianao, raha mahatsiaro ahy ka tsy manadino ny ankizivavinao, ka manome zazalahy ny ankizivavinao dia homeko ho an'ny Tompo izy, amin'ny andro iainany rehetra, ary tsy hokasihin-kareza ny lohany. 12Naharitra ela no nivavahany teo anatrehan'ny Tompo ka nodinihin'i Helì ny vavany. 13Fa niteny anakampo Annà, ka ny molony fotsiny no nihetsiketsika, fa ny feony tsy re akory. Noheverin'i Helì fa mamo izy. 14Dia hoy izy taminy: Mandra-pahoviana hianao no ho mamo? Mampisavà ny hamamoana avy amin'ny divainao. 15Fa hoy Annà: Tsia, tompoko, fa vehivavy ory ao am-pò aho, tsy nisotro divay na fisotro mahamamo aho; fa namboraka ny ato am-poko eto anatrehan'ny Tompo. 16Aza mihevitra ny ankizivavinao ho olon'i Beliala fa ny hamafin'ny alahelo amam-pahoriako no nitenenako mandrak'ankehitriny. 17Dia niteny indray Helì ka hoy izy: Mandehana amim-piadanana, ary hohenoin'Andriamanitr'Israely anie ny vavaka nataonao taminy. 18Ka hoy izy: Hahita fitia aminao anie ny ankizivavinao. Dia lasa nizotra ny làlany ravehivavy, dia nihinana izy ary niova ny tarehiny. 19Ary nifoha maraina koa izy ireo, ka nony avy niankohoka teo anatrehan'ny Tompo, dia nody izy, ka niverina tany an-tranony any Ramà.
20Ary Elkanà nahalala an'i Annà vadiny, ary Iaveh nahatsiaro azy. Ary nony nitsingerina ny andro, dia efa nanana anaka Annà ka dia tera-dahy izy, ary nataony hoe Samoela ny anarany, fa nangatahiko tamin'ny Tompo, hoy izy.
21Dia niakatra Elkanà vadiny sy ny ankohonany rehetra hanatitra amin'ny Tompo ny sorona fanao isan-taona, sy hanefa ny voadiny. 22Tsy mba niakatra anefa Annà, fa hoy izy tamin'ny lahy: Rahefa hitsaha-nono ny zaza dia hoentiko hiseho eo anatrehan'ny Tompo sy hitoetra eo mandrakizay. 23Ary hoy Elkanà vadiny taminy: Ataovy izay heverinao ho mety; mijanòna aty aloha, mandra-panotinao azy, ary ho efain'ny Tompo anie ny teniny. Dia nijanona ravehivavy, ka nampinono ny zanany mandra-panotiny azy. 24Nony efa notazany ny zaza, dia nentiny niakatra niaraka taminy, sady naka vantotr'ombilahy telo, sy lafarina iray efah, ary divay eran'ny siny hoditra izy, dia nentiny nankao an-tranon'ny Tompo tao Silao izy. Mbola tanora kely ny zaza. 25Dia novonoin'izy ireo ny vantotr'ombilahy iray, ary nentiny nankao amin'i Helì ny zaza. 26Ka hoy Annà: Aza mahafady, tompoko. Raha velona koa ny ainao, tompoko, dia izaho ilay vehivavy nitoetra teto akaikinao nivavaka tamin'ny Tompo. 27Ny hahazoako ity zaza ity no nangatahiko ary neken'ny Tompo ny fangatahana nataoko taminy. 28Koa inty kosa aho mahafoy azy ho an'ny Tompo; nafoy ho an'ny Tompo izy amin'ny andro hiainany rehetra. Dia niankohoka teo anatrehan'ny Tompo izy ireo. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0297 seconds